Bishaan Waraabaa Dhangalaasuun Hojii Hiikuudha! |
Home Afaan Oromoo Bishaan Waraabaa Dhangalaasuun Hojii Hiikuudha!
Bishaan Waraabaa Dhangalaasuun Hojii Hiikuudha!
Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Amajji 2,2019
Via Firomsa Abdissa
Dr. Dima Nagawo is a special adviser to PM Dr. Abiy Ahmed on security matters. He is responsible for war on the Oromo people and indirectly responsible for chaos and looming famine in the country
“Jaldeessi ganama dhaabee galgala, funaana!” Jedha Oromoon. Kanaaf haasaa isaa keessatti nama ijaaraa diiguuf, nama funaanaa dhangalaasuun “hojii Jaldeessaa dhiisi!” Jedha. Dhalli namaa dhala namaati, waa hedduudhaan bineensarraa adda ta’a. Kun ta’ee osoo jiruu, namni bakka dubbatutti hinargamne nama jechuun ulfaattuudha. ODP waraabaa dhangalaasaa jira. Baatii 4, yoo waraabe baatii afur ammoo cuggee/okkotee yaadaa, cuggee/okkotee wal hubannaa sana afaan ishee gombisee guyyaa afuritti dhangalaasa. Dhamaatii baatii afur uummata dhamaase, guyyaa afuritti darbatee dhangalaasuu caalaa hojii uummata hiiksisuun hinjiru. ODP hojii hiikee hojii nu hiiksisaa jira kan jedhamaa jiruuf illee kanuumaafi. Uummata araddaasaa/maasii isaa maasii qabsoo qulqulleeffachuuf dafqaa lolaasaa, dhiiga buusaa, lafee caccabaa firii dhamaatiisaa bira gahe karaatti qabe dhaabe. Kan dhaabee gaafa hojii uummata hiiksise “karaa gabaabaan firiikee harkatti sii laadha!” Yaada jedhu fakkaata. Kunis na qabadhu diinnikee anaafis diina, kana booda utuu hindhiigiin, utuu hindararamin, utuu hindhama’in bilisoomta jedhee baatii afuriif sammuu uummataa dubbii arrabaan foska yoona gahe. Baatii afur keessatti, uummata waan hojjetu hiiksisuu bira darbee, meeshaa qabsoo lafa kaahiitti ce’e. Sanarra darbee, kaayyoof akeeka kee waggaa 150 akeeka Oromiyaa bilisaa fi walabaa gati yaada jedhutti ce’e.
ODP gaafa ija hubannaan ilaallu Oromoo irratti baatii arfan darban yakka gurguddaa sadii raawwate:
1. Hojii nu hiiksise, qabsoon akka qilleensi gidduu seenu taasise.
2. Kaayyoof akeeka nurkaa gatee of nu wal’aalchisuuf aggaame
3. Nu hooskaa, nu sossobaa nu ajjeesuu fi nu hidhuutti fuulleffate.
Erga karaa salphaa akka Bilisummaa gonfannu baatii afur dura lallaabee, har’ammoo waa’ee Bilisummaa keenyaa sanatti maaliif bishaan jechaa naqee dhaamsuuf abbalee? Erga karaa salphaa wal qabannee humnoota waggaa 27 nu dararaa turan seeratti dhiyeessuuf waadaa nuu seenee, si duukaa jirra utuu jennuu TPLF haadhoo garboonfataa hidhuu maaliif dhiise? Yeroo nuu laadhaa! Jedhanii nu boonyaan yeroo laanneef. Baatii dheeraa obsa guddaadhaan: Maal nuu godhuuf jiru laa jennee eegne. Obsa fixannee dhumarraa gara hojii keenya hojii qabsoo daandii walakkaa dabarree jirru sanatti ce’uuf murteeffanne. Yeroo kanatti nu duukaa hinbu’inaa, nu duukaa hinqabsaa’inaa Oromoo utuu hinjedhiin hojii nu hiiksisaniif utuu nuyyuu hingaafatin maaf ajjeeffamukee gaafattaaf waraana nutti labsan. Jaldeessuma daggalaa fakkaatanii waan ganama dubbatan waaree darbatanii, waan ganama dhaaban galgala buqqaasanii sanyii nyaachuu jabeessan.
Bishaan Okkooteetti waraabanii, okkotee nagaa fi tasgabbii galagalchanii dhangalaasan. Bishaan hafemmoo abidda jalatti afuufanii bulluksanii ittiin nu waxaluu jalqaban. Nutti facaasanii qaama nu luqqaasuu, bulluqa keessa nu kaahuu fi abiddaan nu waadanii foonkeenya nyaachuutti deebi’an. Hidhaa haareessanii bifa addaan nurratti jalqaban. Tokkoon qabanii nu hidhanii baatii lama dura nu madaalan. Hamma keenya arganii nama hidhamu kurnootaan, dhibbootaan, kumootaan hidhuutti ol guddisaa jiru. Har’a kumootaan dargaggeessa Oromoo hidhuu abalee adeemaa jira.
EPRDF tokkuma, TPLF fi OPDP/ODO maaltu adda godha.
Garaagarummaa TPLF fi ODP madaaluu yaadne. Madaalliin sun sanuma. Xiqqoo garuu OPDO’n Oromummaan yakkuurraa, gara dhaaba uummataa cichanii kanneen deggaran hidhuun TPLF dursite. Akeeka Oromoo afaan Oromoo dubbatu hidhuu TPLF sana dhiiftus hidhuun hidhuu dhuma ta’e. Goolii kaasanii hokkoran uummata nagaa nagaa dhoowwuun ammoo kan ODP caalu hinjiru. ODP ajjeesanii mardoo taa’uu, qalanii imimmaan buusanii boohuu cimsanii itti beeku. ODP waliisaaniifuu kan hintolle nuu tolu jennee abdannuu baannus xiqqummaan isaanii hanga fokkisaa amma ilaalaa jirru kanaa nii gaha jennee hineegne.
Injifannoon Uummataa Oromoof
Previous articleThe Oromo People should call for an independent Transitional Government of Oromia (TGO)
Next articleGaaddisa Dhugaa fi Bu’ura Rakkoo Dirree Dhaawa, Amajjii 02 2019
Araarsaa Mardaasaa poolisoota Oromiyaa kanneen shanee waliin hidhata qaban 1000 irratti tarkaanfiin fudhatamuu EBCtti himanii jiru. January 16, 2021 Araarsaa Mardaasaa poolisoota Oromiyaa kanneen...